ICasale San Martino Agriturismo Bio (indlu yonke)
Indlu yasefama yindawo yobuchule phakathi kweentaba kunye nolwandle, imizuzu engama-20 ngemoto ukusuka kwi-ski slopes kunye nemizuzu engama-40 ukusuka elwandle.
Indawo yokuhlala: yonke indawo (iibhedi eziyi-10), amagumbi (5)
Umgca we-Intanethi we-Wi-Fi uyafumaneka kwiindwendwe kuyo yonke ihotele.
Indlu yasefama isasazwe kwindawo ye-180 square metres kwimigangatho emibini, kunye neveranda kumgangatho ophantsi kunye ne-panoramic terrace kumgangatho wokuqala.
Indawo yokuhlala ephantsi ezimeleyo: igumbi lokuhlala elikhulu le-30 sqm elinendawo yomlilo, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlambela elipheleleyo elinomatshini wokuhlamba. IVeranda kunye nokufikelela kwi-panoramic terrace.
Umgangatho wokuqala ngendawo yokuhlala ezimeleyo: igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokulala elinesithathu, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela elipheleleyo. Ukufikelela kwi-panoramic terrace.
Iindwendwe zingasebenzisa zombini isakhiwo (umgangatho ophantsi kunye nomgangatho wokuqala) kunye nendawo yokuhlala enye.
Ifumaneka embindini weenduli zeMarche kunye nesakhelo seeNtaba zeSibillini, "iCasale San Martino" yikona yoxolo, ijikelezwe ngumhlaba wobunikazi okhule ngokwasemzimbeni kunye nente…